News 18 Nepal || कोरोना भाइरसको खोप हामीले कहिले पाउँछौं ?
रोशन पोखरेल । हामी अहिले आशाको सानो त्यान्द्रोमा बाचिरहेका छौं । कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ को एक वा बढी खोप बन्नेछ र हामी महामारीबाट उन्मुक्ती पाउने छौं । विज्ञहरू पनि सहमत छन्, कि एक खोप बिना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन छ । हामीले अहिले एउटै मात्र उपाय अपनाइरहेका छौं: मास्क, सामाजिक दूरी, परीक्षण ट्रेसिंग पछि टेस्टिंग ।
तर, ती उपायहरू प्रभावकारी भए पनि हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख देशमा कडाइका साथ पालना गर्न सकिने स्थिती देखिदैन । विहान बेलुका दुई छाक खानाकै लागि दिनभरि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा कोरोना भाइरस भन्दा भोकमरीले मर्नेहरु नै धेरै हुनेछन् ।
लकडाउन लगाएर कोरोनालाई केहि मात्रामा नियन्त्रण राख्न सकिन्छ, जुन उपाय हाम्रो देशमा पनि अवलम्बन गरियो तर अर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक भएपछि सरकार खोल्न बाध्य बन्यो । केहि दिन लकडाउन सहज बनाउँदा नयाँ कोरोना भाइरससम्बन्धी मामिलाहरू बढ्न थाल्यो, जसले सरकार पुन: लकडाउन गर्न बाध्य बनेको छ । त्यो चक्र भाँच्न केवल एउटा मात्र विकल्प छ खोप । त्यसो भए हामीले अब कति लामो समय कुर्नु पर्ने हुन्छ ? हामी खोप विकास प्रक्रियामा कहाँ छौं त ?
बिल गेट्सका अनुसार यदि तपाईं औद्योगिक संसारमा बस्नुहुन्छ भने अर्को एक वा दुई वर्ष ठूला योजनाहरू नबनाउनुस् । धनी देशहरुमा सन् २०२१ को अन्त्यसम्म खोप उपलब्ध हुन सक्ने छ तर विश्वभरिका मानिसले खोपका लागि २०२२ को अन्त्य सम्म पर्खनु पर्नेछ ।
COVID खोप विकास द्रुत गतिमा हुँदै
खोप विकास गर्न व्हाइट हाउसको अपरेसन वार्प स्पीडजस्ता कम्पनीहरु तयारी अवस्थामा छन् । उनीहरू एफडीए स्वीकृति पाउने बित्तिकै लाखौं खोप डोज वितरण गर्न तयारी अवस्थामा रहेका छन् । खोपहरू विकास र अनुमोदन गर्न प्राय १० देखि १५ वर्ष लाग्ने गर्दछ । जसमा चार चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा मानव परीक्षण पनि समावेश छ ।
तर अपरेशन वार्प स्पीडको साथ, सबै चार चरणहरू पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने छैन । अनुमोदित खोप परियोजनाहरूले एफडीएमा थोरै डाटा पेश गरि उत्पादन गर्न सक्नेछन् । यसैबीच, कार्यक्रमले खोप उत्पादन गर्न आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेको छ जबकि क्लिनिकल परीक्षणहरू अझै जारी छन् । यसको मतलब जब ती खोपहरू स्वीकृत हुन्छन्, त्यहाँ पहिले नै राष्ट्रिय वितरण गर्न डोज स्टोरको एक स्टोर हुनेछ ।
कोभिड-१९ को खोप पत्ता लगाउने दौडमा केहि कम्पनीहरु अगाडी देखिएका छन् । उनीहरु परीक्षणमा लागि परेका छन् ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय/एस्ट्राजेनेका (युके) : हाल कम्तिमा तीन देशहरूमा १,००,००० मानव स्वयंसेवकहरुमा यो खोप परीक्षण गरिएको छ । प्रमुख अन्वेषक डा. सारा गिलबर्टले भनेका छन् कि उनीहरू २०२० को अन्त्य सम्ममा खोप विमोचनको लक्ष्य लिएका छन् ।
Moderna (अमेरिका) : सरकारी नियामकहरुसंग एक स्पष्ट झगडाका बाबजुत Moderna का सीईओ बारनको बताउँछन्, कि उनी अझै पनि सुरक्षित र प्रभावकारी औषधी निर्माण गर्नेछन् । उनको आशा छ कि कम्पनीले निर्माण गर्ने खोप सुरक्षित र प्रभावकारी हुनेछ । यसलाई २०२० को शुरुमा वितरण गर्ने उनको तयारी छ ।
फाइजर (अमेरिका) : यद्यपि यसका चार भ्याक्सिन उम्मेद्वारहरू अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा मानव परीक्षणहरूमा छन् । ती मध्ये दुईलाई एफडीएले द्रुत ट्र्याक गरेको छ । फाइजरका प्रमुख व्यवसाय अधिकारीले अमेरिकी कंग्रेसलाई भनेका छन्, कि कम्पनीले अक्टोबरमा एफडीए स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन तयार हुन सक्छ ।
सिनोवाक (चीन) : हाल चीनमा १०,००० र ब्राजिलमा करीव ९,००० मानव स्वयंसेवकहरुमा यस खोपको परीक्षण गरिदैछ । यो खोप चाँडै इन्डोनेसियामा पनि १,९०० भन्दा बढी व्यक्तीहरुमा टेस्ट गर्ने तयारी गरिएको छ । सिनोवाकका इन्डोनेसियाली साझेदार बायोफर्माका सीईओले भनेका छन्, २०२१ को सुरुमा यो खोप तयार हुनेछ ।
सिनोफार्म (चीन) : हाल मध्य पूर्वीमा १५,००० स्वयंसेवकहरुमा यो खोप परीक्षण भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले ३ देखि ६ महिनाभित्र खोप तयार हुने आशा राखेको छ । सिनोफार्मले भर्खरै खोप निर्माण गर्न धेरै मात्रामा कच्चा पदार्थ जम्मा पारेको छ । यस कम्पनीले वर्षमा दुई करोड डोज खोप तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
क्यानसिनो जीवशास्त्र (चीन) : यो खोप गर्मीमा ठूलो मात्रामा मानव परीक्षण सुरु गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको छ । क्यानसिनो खोप चिनियाँ सेनाको लागि अनुमोदन भइसकेको छ ।
के सबैलाई एक मात्र खोप दिइनेछ ?
हामीले सायद अर्को वर्ष सम्म थाहा पाउँदैनौं, तर फौसीले सुझाव दिएका छन् कि यस महामारीको अन्त्य गर्न विभिन्न प्रयोगशालाहरूले बनाएका विभिन्न किसिमका खोपहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ जुन साइन्स जर्नलमा ११ मे मा प्रकाशित गरिएको एउटा पेपरमा बताइएको छ ।
यदि हामीले कोरोना भाइरसको खोप फेला पारेनौं भने के हुन्छ ?
कोरोना भाइरस भाइरसहरूको एक ठूलो वर्ग हो । अहिले सम्म यसको कुनै पनि खोपहरू बनेका छैनन् । सन् २०२१ सम्ममा भ्याक्सिन आउने ग्यारेन्टी पनि छैन । रोयटर्सको विशेष प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२१ सम्म यसको खोप ६ प्रतिशत व्यक्तीहरुमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । प्रारम्भिक प्रमाणले देखाउँछ कि कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा वा फ्लूको रूपमा प्रायः परिवर्तन हुँदैन । यो भाइरस अझैसम्म खोप विकासमा अवरोध पुर्‍याउन पर्याप्त परिवर्तन भएको छैन । यद्यपि हाम्रो ज्ञान परिवर्तन हुन सक्छ ।
हामी खोप बिना लामो समयसम्म पनि जान सक्ने छौं । जस्तै प्रयोगात्मक एन्टिवाइरल ड्रग रेमेडेभाइर, जसले कथित आशाजनक परिणामहरू देखाएको छ । डेक्समेथासोन, डॉक्टरहरूले भनेका छन् जसले सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा बाँच्ने दर बढाउँदछ । उदाहरणका लागि, एचआईभी बिरामीहरूले अब गैर एचआईभी पोजिटिभ व्यक्तिको जस्तै जीवनको आशा गर्न सक्छन् । (अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमको सहयोगमा)